Somaliland iyo Taiwan oo Si Weyn U Soo Dhaweeyey Qoraalkii Ka Soo Baxay Mareykanka | Gabiley News Online
– Dowladdaha Somaliland iyo Taiwan ayaa si weyn u soo dhaweeyey qoraalkii ka soo baxay Golaha Amniga Qaranka ee dalka Maraykanka (National Security council ‘NSC’) oo lagu ammaanay xidhiidhka dhexmaray dalalka Somaliland iyo Taiwan.
Qoraalkaasi Maraykanka ayaa lagu caddeeyey in xidhiidhka Taiwan ka bilowday Bariga Afrika uu yahay mid yimid xiligii loogu baahida cuslaa.
Qoraallo maanta lagu faafiyey Twitter-ka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland iyo Wasaaradda Khaarajiga Taiwan waxa lagu sheegay inay ku faraxsan yihiin qoraalka lagu bogaadiyey xidhiidhkooda ee ka soo baxay dowladda Maraykanka, waxayna Somaliland iyo Taiwan iftiimiyeen inay labadooda waddan xidhiidh fiican la leeyihiin dalka Maraykanka.
Dowladda Maraykanku waxay muddooyinkii u dambeey wax weyn ka beddeshay siyaasadeeda arrimaha dibadda iyo qorshayaasha khuseeya danahooda qaran, amni iyo dhaqaale, waxayna calaamadiyeen in dalka Shiinuhu yahay cadowga koowaad (enemy number one) ee danaha Maraykanka.
Waxaannu Shiinuhu kaalintaas koowaad ka cidhiidhsaday kooxaha loo yaqaan argagixisada iyo dalal kale oo Maraykanku u aqoonsan yahay inay halis ku yihiin dalkooda, sidaa darteed dagaalkooda siyaasadeed iyo dhaqaale waxay ku jiheeyeen dhinaca Shiinaha, weliba meelaha sida gaarka ah loogu dagaalamayo waxa ugu mihiimsan qaaradda Afrika, taasina waxay keenaysaa in dagaalkaas u dhexeeya Shiinaha iyo Maraykanku uu faa’iido u noqdo Somaliland iyo Taiwan.